rescuecd [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/7/74aa5488de044f8849213db07d4ab1ed.xhtml failed
Ohatra amin'ireo RescueCD tena malaza
Araka ny hita ao amin’ny Distribution dia ilaina ny RescueCD hitsaboana sao misy virus ,na simba ny disque na mijery koa sao simba ny RAM. Azo ampiasaina ihany koa izy atao fanaovana recuperation n’ireo donnees sy ny maro hafa. Matetika ny RescueCD dia bootable, izany hoe hahafahana mamelina avy hatrany ny milina.
UltimateBootCD - http://www.ultimatebootcd.com/ : Hahitana karazana outils maro fitsaboana, fandikana mitovy, famafana tanteraka (Wiping) sy fanaovana test ny disque dur , ny RAM, misy Antivirus maromaro efa miaraka aminy ao koa ho an’ireo izay tratran’ny virus.
SystemRescueCD - http://www.sysresccd.org/ : CD Linux izy ity ary misy karazana kirakira maro toy ny fikirakirana Partition , ireo fitaovana fanaovana test ny reseau, afaka mamaky systeme de fichiers maromaro.
Ireo karazany rehetra : LiveCD
rescuecd.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43